Global Voices teny Malagasy » Ireo Nisongadina nandritra ny Fetiben’ny Rano tao Kambodza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Desambra 2018 15:09 GMT 1	 · Mpanoratra Beth Kanter Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Azia Atsinanana, Ejipta, Kambodza, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka
Notanterahina ny 15-17 Novambra ilay Fetiben'ny Rano (“Bon Om Tuk”), fetibe mihetsiketsika indrindra ao Kambodza. Araka ny voalazan'i Jinja , manamarika ny fiandohan'ny maintany sy ny Bon Kathan (fomba Bodista fatao isan-taona izay anomezana akanjo rebareba vaovao ho an'ny moanina) io Fetibe io.
Olona mihoatra ny iray tapitrisa avy amin'ny sarangam-piainana rehetra sy manerana ny firenena no nirohotra teny amin'ireo bankin'ny Tonle Sap sy ny Renirano Mekong tao Phnom Penh mba hijery ny hazakazaka an-tsambo nentim-paharazana. Toy ny voamarik'i Phatry mikasika ilay vahoaka be, ”Tara be aho vao nifoha, tamin'ny 10 maraina. Efa maro tsy voaisa ireo phnom penhois, ireo olona avy any ambanivohitra, ary ireo mpizahatany nameno ny amoron-drano sy ny faritra misy ny tsangambato fahatsiarovana ny fahaleovantena.
Hifaninana ireo sambo sy mpivoy aman-jatony, ao anatin'izany ny sambon'ny ekipan-dehilahy sy vehivavy mitondra ny VIH. 
Araka ny voalazan'i Jinja, maro ireo tanàna nandefa ekipa ho any Phnom Penh. Matetika, apetraka anatinà tempolim-piarahamonina (‘Vat’) ny sambon'ny tanàna ary manomboka mizatra mandritra ireo volana maro mialoha ny volana Novambra ilay ekipa. Mandrafitra ekipa an-tsambo ireo orinasa, ireo fikambanana tsotra na tsy mitady tombontsoa manokana, ary ireo vondronà mpinamana.
Misy rehareha lehibe ho an'ny ekipan'ny sambo ao an-tanàna. Toy ny marihin'i KhmerAK, ”Tonga hijery ilay hazakazaka an-tsambo manerana ny renirano ny olona ary indrindra ho fanohanana ireo avy any amin'ny faritany misy azy, ary angamba izaho koa, handeha hanohana ny avy any amin'ny faritany misy ahy . . . ”
Ankoatra ilay sary etsy ambony, naka sary vitsivitsy mahatalanjona  mampiseho ireo sambon'ny Fetiben'ny Rano i Jinja. Naka sary ny sasany tamin'ireo sambo nirehitra tao amin'ilay renirano ny harivan'io ihany koa izy, toy ity iray ity:
Mandritra izany fotoana izany, ampahatsiahivina mikasika ny Fetiben'ny Rano ireo bilaogera Kambodziana mipetraka any ivelan'ny firenena, toa an'i Wanna  (rohy maty).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/05/130512/
 Phatry : http://phatrypan.blog.com/405696/
 ny sambon'ny ekipan-dehilahy sy vehivavy mitondra ny VIH.: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4441464.stm
 naka sary vitsivitsy mahatalanjona: http://www.flickr.com/photos/jinja_cambodia/62773242/